Mareykanka madow waa shaqeystaa
USA, 4 Feb 2015 (Alldhooftinle.com)
James Robertson oo ah nin madow kuna nool Magaalada Detroit ee dalka Maraykanka ayaa 10 sanadood maalin kasta lugeynayey 34 KM si uu u shaqeeysta.
James Robertson oo ah nin madow kuna nool Magaalada Detroit ee dalka Maraykanka ayaa 10 sanadood maalin kasta lugeynayey 21 mile oo u dhiganta 34km si uu u shaqaysto. Ninkan oo 56 jir ah waxaa gaadhigii ugu danbeeyey ka jabay toban sano ka hor, mushaharka uu qaato oo 10 doolar saacadii ah ayaa u qaybsami waayey biilkiisii iyo inuu gaadhi ku iibsado.
Ninkan 56 jirka ah ayaan baraf, roob iyo qabow midna ka joojin inuu safarkaa dheer u galo shaqadiisa. Ninka madaxda ka ah shirkada uu James u shaqeeyo ayaa cadeeyey inaanu James hal maalin shaqadiisa ka maqnaan, taasoo dad badan ka yaabisay.
Laakiin markii uu soo baxay warka ninkan masaafada dheer u shaqa taga waxa u istaagay websaytka la yiraahdo GoFundMe, waxayna laba maalmood ugu ururuyiyeen lacag gaadhaysa 230,000 doolar, iyadoo marka hore qorshuhu ahaa inay 5000 doolar u ururshaan.
James ayaa isna sheegay inay caadi u noqotay inuu maalin kasta lugeeyo, inkastoo qabawga jiilaalka iyo kuleylka xagaagu ay dhibaato weyn ku hayaan, wuxuu kaloo sheegay in labada maalmood ee uu fasaxa yahay uu hurdo ku dhamaysto.
Abraar Bin Jacfar-AlMakhzuumi